ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, The Voice ဂျာနယ် မေလ ဒုတိယပတ်.. , တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၅၉) (VOA အသံဖိုင်), ABMA ဂျာနယ်..... ~ ဒီမိုဝေယံ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, The Voice ဂျာနယ် မေလ ဒုတိယပတ်.. , တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၅၉) (VOA အသံဖိုင်), ABMA ဂျာနယ်.....
လူသတ်သမား ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ဆိုင်ခန်းအကြောင်းတွေ၊ ဆေးတွေဈေးကြီးတာတွေ၊ အရိုက်ခံရတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ လူနာတွေကို မတရားပြုနေတာတွေက မဟုတ်လို့လား? ဘာမှမတက်ပဲ အစာအိမ်ပေါက်တဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကို သူ့ဆီမှာ တစ်ပါတ်လောက် ကုတယ်၊ ခွဲစိတ်လိုက်၊ ပြန်ချုပ်လိုက်နဲ့ သေခါနီးမှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့တာ ခင်းဗျားတို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ဆေးမှတ်တမ်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ အဲဒီလူနှစ်ယေက် ဗိုက်တွေကို လာကြည့်စမ်းပါဗျာ… ကျုပ်တို့မြို့မှာ ရှိပါတယ်…။ သက်ဆိုင်ရာမှ အသေချာ ဆောင်ရွက် ပေးစေချင်ပါသည်....။
The Voice ဂျာနယ် မေလ ဒုတိယပတ်..
The Voice May 2nd Week မြန်မာ ပါကစ္စတန် အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ ဦးခွန်ဆာ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - အပိုင်း (၁)
တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၅၉) (VOA အသံဖိုင်)
အိုဆာမာ ဘင်လာဒင် (Osmar Bin Laden)၊ ပါကစ္စတန်မှာ နေထိုင်နေခဲ့တာကို မသိလိုက်ပါဘူးလို့၊ ပြောဆို ထားတဲ့ ပါကစ္စတန် ထောက်လှမ်းရေး Inter-Services Intelligence (ISI) နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ထောက်လှမ်း ရေး (DDSI) တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေး နဲ့၊ အမေရိကန်က အလိုရှိခဲ့တဲ့ ဦးခွန်ဆာကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်လက်ခံ ထားခဲ့စဉ်က အခြေအနေနဲ့၊ အမေရိကန်က အလိုရှိခဲ့တဲ့ ဘင်လာဒင်၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာ တရားမ၀င် နေ ထိုင်ခဲ့ပုံတွေကို၊ နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်နဲ့ ဦးရော်နီ ညိမ်းက မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာ ကို၊ ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” ကဏ္ဍမှာ စီစဉ် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ အခု ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း (ISI) က၊ အိုဆာမာ ဘင်လာဒင်၊ သူတို့ရဲ့ မြို့တော် အစ္စလမ္မဘတ် (Islamabad) နဲ့ (၃၅) မိုင်အကွာက၊ တောင်ပေါ်အပန်းဖြေမြို့ တပ်မြို့လည်း ဖြစ်တဲ့၊ ကျနော်တို့ဆီက မေမြို့၊ ကလောမြို့၊ ဗထူးမြို့တို့လို တပ်မြို့ အဘတ်ဒဘဒ် (Abbottabad) မြို့မှာ၊ ပါကစ္စတန် စစ်တက္ကသိုလ် နဲ့ (၁)မိုင် မပြည့်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေတဲ့၊ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ အိမ်ခြံဝင်းကြီးထဲမှာ၊ နေနေတာကို မသိလိုက်ပါဘူးလို့ ပြောနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်အစိုးရက၊ ISI ကို အယုံအကြည်မရှိဘူးဆို တဲ့ အနေအထားကိုလည်း၊ အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘင်လာဒင်ကို ဖမ်းဆီးသုတ်သင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကို ကြည့်တဲ့အခါ မှာ၊ ကျနော်တို့က တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကရော၊ ဒီပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေး (ISI)နဲ့၊ ပတ်သက် ဆက်နွယ်ခဲ့ဘူးတာ ရှိသလားဆိုတာကို၊ စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ ISI နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများ ရှိခဲ့ပါသလဲ၊ ဗိုလ်မှူး သိမှီသလောက်၊ ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ့််။ ။ ၁၉၉၃၊ ၉၄ ခုနှစ် လောက်က ပေါ့လေ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကကလှမ်း (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး Directorate of Defnce Services Intelligence – DDSI) မှာ၊ ရှိနေတဲ့ အချိန်အခါမှာ ဒုညွှန်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းနဲ့အတူ၊ ကျနော်နဲ့ တခြားအရာရှိကြီး တယောက်နှစ်ယောက်တို့ ပါတဲ့အဖွဲ့က၊ ရန်ုကုန်မှာ၊ ပါကစ္စတန် ထောက်လှမ်းရေး က အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့၊ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့၊ အနေအထားမျိုး ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။
မခင်မမမျိုး။ ။ ဒီ ပါကစ္စတန် scientist (သိပ္ပံပညာရှင်)နှစ်ယောက်ကိစ္စမှာ ကျတော့၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန် ပိုင်းမှာ၊ terrorist connection (အကြမ်းဘက်သမား နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိမှု) ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် တရားခံတွေအနေနဲ့၊ CIA (Central Intelligence Bureau အမေရိကန်ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင် စီ) ကနေ၊ တောင်းဆိုလာတဲ့ အချိန်ကျမှ၊ ဒီလူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို၊ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံက ထုတ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။